यस्तो वेश्यालय जहाँ ग्राहकले पैसा तिर्नु पर्दैन - Suchana Daily
यस्तो वेश्यालय जहाँ ग्राहकले पैसा तिर्नु पर्दैन
प्रकाशित भएको : Saturday, 13 January, 2018
एजेन्सी । दुनियाँमा एउटा यस्तो वेश्यालय पनि छ जहाँ ग्राहकले पैसा नतिरिकनै यौनक्रिडा गर्न पाउँछन् ।
उक्त वेश्यालयका यौनकर्मी महिलाहरुले यौनकर्म गरेबापत आफ्ना ग्राहकबाट रकम असुल्दैनन् । बस्, त्यहाँ ग्राहकले एउटा शर्तको पालना गर्नुपर्दछ । भाकियामा एउटा यस्तो वेश्यालय रहेको छ । उक्त वेश्यालयको सेवा लिनका लागि धेरै मानिसहरु तछाडमछाड गर्दछन्। किनकि त्यहाँ सित्तैमा सम्भोग गर्ने मौका छ ।
तर उक्त वेश्यालयमा सम्भोग गर्न चाहने पुरुषहरुले एउटा शर्त पालना गर्नुपर्दछ । जुन सर्त जोकोहीलाई स्वीकार्य नहुनसक्छ । वेश्यालयका यौनकर्मी महिलासँग सेक्स गरेको भिडियो खिच्ने शर्तमा मात्र त्यहाँ सित्तैमा सेक्स गर्न पाइन्छ । त्यसरी खिचिएको सेक्स भिडियो जुनसुकै बेला व्यवसायिक रुपमा बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ ।
यी हुन् यौ@न क्षमता बढाउने शक्तिबर्दक खानेकुरा
जाडो याममा किन बढी सेक्स गर्छन् पुरुष ?
योनिच्छद फाटेको छ ? कुमारी होईन भन्नु गलत
अर्काे एक पोर्न स्टारको बलिउडमा इन्ट्री, पोष्टरले मच्चायो तहल्का
तपाईंलाई थाहै नभएका मानिसका ‘आँखा’सम्बन्धि यस्ता छन् तथ्यहरु !
तनाव लिन छाड्नुहोस : डण्डीफोर र बुढ्यौलीबाट बच्नुहोस्